Tap Titans22.10.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.10.1 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား တကိုယ္ေတာ္ Tap Titans 2
Tap Titans2၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဓားမဟာဖို့အတွက် Titans တွေကကျူးကျော်အနေနဲ့အားလုံးအသစ်ကပိုပြီးအန္တရာယ်ရှိတပ်မတော်အနေဖြင့်ကမ္ဘာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်အဖြစ်စစ်တိုက်ခြင်းငှါဆက်လက်ရေးသားထားသည်။ အ Titan ရဲ့အစဉ်အဆက်-တိုးမြှင့်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိကိုကျော်လွှားရန်နည်းလမ်းအသစ်များကိုထဲမှာ Power တက်ဓားမာစတာ။ Titanic သင်္ဘောနစ်ကျောဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဓားကိုကောက်သစ်နှင့်ခရီးကိုစတင်!
๏သွားလာရင်းအပေါ်အပြည့်အဝ RPG အတှေ့အကွုံခံစားပျော်ရွှင်
๏ 10 အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့, လက်-ရေးဆွဲဘုံထဲမှာ 120 All-အသစ်ဖို့အတွက် Titans တွေကအနိုင်ယူဖို့ TAP
သင် Titan တိုကျခိုကျမှုကိုတွန်းလှန်ကူညီဖို့ရန်๏န်ထမ်းခေါ်ယူမှုသူရဲကောင်းများနှင့်သစ္စာစောင့်သိအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ
๏သင့်ရဲ့ playstyle ကိုက်ညီရန်သင့်သူရဲကောင်းရဲ့ရူပနှင့်အားသာချက်များစိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းကိရိယာများစုစည်းရရှိ
๏အခြားကစားသမားနှင့်အတူတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းနှင့်တန်ခိုးရှင် Titan ရှင်များ ဟူ. အနိုင်ယူဖို့မျိုးနွယ်စုများ CREATE သို့မဟုတ် join
◆◆ Reddit & Facebook ပေါ်မှာသင့်ရဲ့အသာပုတ်ဖို့အတွက် Titans တွေကသူငယ်ချင်းများ Join
◆စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & သီးသန့်လုံခြုံရေး◆
Tap Titans2အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Tap Titans2အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Tap Titans2အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Tap Titans2အား အခ်က္ျပပါ
ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ပါသည္ 12
tedhdhs စတိုး 34 20.66k
Tap Titans2ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Tap Titans2အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Game Hive Corporation
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.gamehive.com/privacy
Release date: 2018-09-06 15:13:50
လက်မှတ် SHA1: 8F:0F:6D:3E:3B:3A:4A:DC:C3:15:ED:68:B4:1A:58:87:4A:07:15:86
အဖွဲ့အစည်း (O): Game Hive Corporation
Tap Titans2APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ